Abafazi bavela kwi-RIM, Amadoda avela kuGoogle | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 27, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Ngubani owaziyo ukuba izixhobo, amaqonga, iiapps kunye nokucofa amaxabiso (CTR) ahlukile phakathi kwamadoda nabasetyhini kwizixhobo eziphathwayo? Ukungasebenzi Kutshanje ndikhuphe le infographic yentengiso ethetha ngumahluko. I-Inneractive isebenzise i-injini yokwandisa ingeniso yexesha lokwenyani eqhubeka nokusebenza ukuqinisekisa ukuba ufumana elona nqanaba liphezulu lokugcwalisa kunye ne-eCPM enokwenzeka ngawo wonke umzuzu.
Iziphumo ezibini eziphambili:
Amadoda aphendule kwintengiso yeselfowuni kwaye anamaxabiso aphezulu kakhulu okucofa.
Amadoda atsaleleke kwiGoogle Android, abafazi kwiRIM's Blackberry.